वीरगञ्जको आइसोलेसनबाट स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पत्र – The Public Today
वीरगञ्जको आइसोलेसनबाट स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पत्र
विजय कुमार सिंह जेठ ३, २०७७ १२:४६ pm
म भने खुसी हुन सकेको छैन । मलाई आत्मबल बलियो बनाएर मात्र कोरोना भाइरसलाई जित्न सकिँदैन भन्ने लाग्न थालेको छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन संक्रमितलाई पौष्टिक खाना, सरसफाइ, उपचारलगायतका मापदण्डबारे तपाईंलाई बताइरहनु पर्दैन । किनकी तपाईंको हातमा स्रोतसाधन र वरपर विज्ञ सल्लाहकार रहेका छन् ।
हामी अस्पताल आएको शुक्रबार ६ दिन भयो । संक्रमितको रुपमा अस्पतालमा बसाई‌‌को अनुभव तपाईंलाई सुनाउन यो पत्र लेख्दैछु । बारा र पर्सामा आइतबार दुई पत्रकारसहित ३९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएछ । अरू बेलामा संक्रमितलाई लिन जाँदा काउन्सिलिङ गर्ने स्वास्थ्यकर्मीसमेत हुने गरेकामा हामी दुई पत्रकारलाई एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीले अस्पताल ल्याए ।
नारायणी अस्पतालको प्रसूति वार्डमा तयार पारिएको आइसोलेसनलाई नगन्हाउनेसम्म बनाइएको रहेनछ । पहिला १२ वटा बेड रहेको कोठामा अहिले आठ बेड राखिएको रहेछ । दुईवटा बेडका लागि एउटा पंखा छ । कोठाको एक छेउमा सामूहिक धारा छ ।
आइसोलेसन वार्ड बनाइएको प्रसूतिका तीन कोठामा २३ जना संक्रमित राखिएको छ । २३ जनाका लागि दुईवटा शौचालय छ, एउटामा ढोका छैन । प्यानको कुरा गरिसाध्य छैन, भुइँ र भित्ता काईले छोपिएको छ । सफा भन्न नमिल्ने बाथरुम पनि सामूहिक नै छ । यसलाई दैनिक एकपटक सफा गरिदिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ कि ?
अब कुरा गरौं, खानेकुराको । पहिलो रात दाल–भात, तरकारी खाएर सुत्यौं । बिहान खाजामा दूध, अण्डा र पाउरोटी आयो । म अण्डा खान्न । खाना ११ बजे आयो, दिउँसोको खाजामा चाउचाउ मिल्यो ।
अर्को बिहानको खाजामा बिस्कुट र दुई–दुईवटा अण्डा थियो । अण्डा नखानेका लागि एउटा टाइगर बिस्कुट । दिउँसोको खाना ढिलै आयो । भोकले रन्थनिन थालेपछि केही साथी कराउन थाले, सुनिदिने कोही थिएनन् । मान्छे त्यसै झ्याल फोडेर भाग्ने अवस्था आएको हैन नि मन्त्रीज्यू !
बिहान तातोपानीका लागि पहल गर्‍यौं । ९ बजेतिर तातो र चिसो पानी दिने एउटा इलेक्ट्रिक मेसिन आइपुग्यो । त्यो पनि सफा नगरी पठाएछन् । कपडा मगाएर पुस्ने–पखाल्ने काम गरियो । २३ जनालाई एउटा मेसिन र एक जार पानी । एकै छिनमा सकियो । यसबारे जानकारी गराएपछि महानगर प्रमुखले बल्ल बेलुका पानीका जार पठाइदिनुभयो ।
हामीले पानीका लागि छटपटिँदै त्यो दिउँसो कटाउन परेको थियो । कति साथीले त ढोका नै फोडुँला जस्तो गरे । बाँकीले सम्झाएर राख्यौं । कोरोना संक्रमितका कोठैपिच्छे एक–एक वटा मेसिन र जारको व्यवस्था गर्न सके सहज हुने थियो, मन्त्रीज्यू ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा व्यक्तिगत सरसफाइ महत्वपूर्ण हुने हुँदा आइसोलेसन वार्डहरूको सफाइबारे पनि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईं पस्न डराउने ट्वाइलेट–वाथरुम हामी प्रयोग गर्दैछौं । तर हामी संक्रमितले सकेसम्म फरक चर्पी प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर यहाँ हामी २३ जनाका लागि दुईवटा चर्पी छ । त्यसमध्ये एउटामा त ढोका पनि नभएकाले बिहान पालो पाउन मुस्किल पर्छ ।
हामी संक्रमित भएपछि हाम्रा परिवार र साथीहरू समेत दुर्व्यवहारमा पर्न थालेका छन् । छरछिमेकको व्यवहार बदलिएको छ ।
भित्र हामी जसोतसो जब्बर भएर बसेका छौं । तर बाहिर सामाजिक व्यवहार बिग्रेको छ । हामी संक्रमित भएपछि हाम्रा परिवार र साथीहरू समेत दुर्व्यवहारमा पर्न थालेका छन् । छरछिमेकको व्यवहार बदलिएको छ । हाम्रा परिवार चिन्तित छन्, निश्चिन्त गराउने उपाय अपनाइएको छैन ।
त्यसो त आइसोलेसनमा पनि संक्रमितप्रति ठीक व्यवहार भइरहेको छैन । हाम्रा लागि चिडियाखानाको जस्तो ढोकामा खाजा–खाना ल्याएर छोडिन्छ । फेरि सबै संक्रमित सबै पक्षमा सचेत छन् भन्ने होइन । उनीहरूमध्ये कति डाक्टर, नर्स आएर नभेटेकोमा रुष्ट छन् ।
डक्टर–नर्स आएर ‘कस्तो छ ?’ भन्दा बिरामीको आधा दुःख दूर हुन्छ । तर, हाम्रो वार्डभित्र जम्मा एक पटक एउटी नर्स औषधि दिन छिरेकी थिइन् । त्यसपछि कुनै स्वास्थ्यकर्मी देखिएका छैनन् ।
तर, सबै संक्रमित त्यो मानसिक स्थितिमा छैनन् । उनीहरूलाई खोई काउन्सिलिङ ? आइसोलेसनबाट भाग्ने अवस्था त्यसै आएको हैन, मन्त्रीज्यू ।
हामी पत्रकारको त कुरा सेयर गर्ने दायरा पनि अलि फराकिलो हुन्छ । विभिन्न व्यक्तिका विविध कुराबाट पनि हामी आफूलाई सम्हाल्छौं । तर, सबै संक्रमित त्यो मानसिक स्थितिमा छैनन् । उनीहरूलाई खोई काउन्सिलिङ ? आइसोलेसनबाट भाग्ने अवस्था त्यसै आएको हैन, मन्त्रीज्यू ।
संक्रमित भनेको बिरामी हो । बिरामी भागे गोली ठोक्ने निर्णय आधुनिक युगको कुनै पनि सरकारबाट हुनुहुँदैन । उनीहरूलाई सामान्य मानवीय व्यवहार र काउन्सिलिङ गरे काफी हुनेछ मन्त्रीज्यू ।
आइसोलेसनमा वार्डमा ‘अनुशासनमा बसौं, सभ्य नागरिकको परिचय दिऔं’ लेखिएको छ । यो भनेको के हो ? संक्रमितलाई बुझाउन आवश्यक छ । बुझाउने काइदा पनि सभ्य नै हुनपर्दो हो ।
सामान्य व्यवहारिक जीवन बिताइरहेका नागरिकहरू आइसोलेसन वार्डमा आएका छन् । यीमध्ये कोही त धेरै दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका पनि छन् । कोही काम गर्ने ठाउँबाट पैदल हिँडेर, ट्रक वा कन्टेनरमा कोचिएर फर्केका छन् । उनीहरूको मनोदशा मैले व्यक्त गर्न सक्ने कुरै भएन ।
केही पूर्वतयारी नभएको बेला कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको छ । अहिलेलाई सबैकुरा तपसिलमा राखेर कोरोना भाइरसको ‘चेन’ भत्काउनु पर्नेछ । त्यसका लागि हामी जनता तयार छौं, मन्त्रीज्यू पो के गर्दै हुनुहुन्छ ?
क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, विचार, विविध, समाज
हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी
१ ब्रोडगेज रेल चढ्ने नेपालीको चाहना पुरा हुन्छ : मन्त्री यादव
२ कोभिडको नयाँ भेरियन्ट भित्रिन नदिन यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय
३ एमाले अध्यक्षमा केपी ओली भारी मतले विजयी
४ दोस्रो चरणमा कम गोल,थ्री स्टार स्तब्ध हुँदा आर्मीलाई धक्का
५ एमाले महाधिवेशन : दुई हजार ८५ मत खस्यो,चार घण्टामा नतिजा
६ तलेजु भवानीलाई हनुमानढोका भित्र्याइयो
७ अस्ट्रेलिया:कोभिड अस्पतालमा महिलाले लगाइन् आगो
८ हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी